Raadinta iyo Baraha Bulshaddu MA FUDUD
Ganacsiyada, Warbaahinta Cusub SAHAL MA AH
Arbacada, Juun 9, 2010 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Warbaahinta bulshada waa fududahay. Habaynta mashiinka raadinta waa fududahay. Blogging waa fududahay.
Jooji oraahdeeda. Run maahan. Tiknoolajiyaddu waa cabsi badan tahay. Shirkadaha caadiga ah waxay la halgamayaan ka faa'iideysiga tikniyoolajiyadda iyo kanaallo cusub si ay u helaan natiijooyin wanaagsan. Kuwo badan ayaa ka taga ama ka fogaada gebi ahaanba. Khadka tooska ah, raadinta iyo baraha bulshada kama yara cabsi.
Twitter waa mid fudud, sax? Sidee ayey u adagtahay in la qoro 140 xaraf? Maaha… ilaa aad ku xidhato shaqada dhowr mas'uuliyadood oo kale, adigoo cadaadis ku saaran inaad natiijooyin keento inta lagu jiro hoos u dhaca dhaqaale, oo aad rabto inaad isku dhafto fariin weyn oo aad la socoto raadraac caafimaad leh si aad dib ugu celiso taraafikada bartaada si aad ugu beddesho macmiil. Oo dhammaantood samee iyada oo aan laga fogeyn waxyaabaha soo socda oo aan waxyeello u geysan astaantaada.
Isku-hagaajinta ayaa fududahay, sax? Kaliya hel ereyada muhiimka ah oo ku celi tan jeer jeer. Hubso… inaad dhab ahaan u tartameysid eray-fure - markaa SEO ayaa aad uga dhib badan.
Bixi guji kasta waa sahlan yahay. Miisaaniyad deji oo saxaafadda tag. Kadibna miisaaniyadaada qalaji adigoon helin wax isbadal ah. Hagaajinta dhibcaha tayada xayeysiinta, dejinta wicitaanada waxqabadka, beegsiga waxyaabahaaga, jadwalka xayeysiiskaaga, bilowga istiraatiijiyad keyword taban, iyo hagaajinta boggaaga degitaanka ma ahan wax fudud.
Blogging waa gabal keega. Ku rakib WordPress koontada martigelinta $ 6 oo qor waxyaabaha maalin kasta. Ku habboon mawduucaaga. Kafiiri qoraal kasta. Kor u qaad barta. Isugeyn waxyaabaha ku jira. Maalin kasta wax ka qor isla badeecadaha, adeegyada iyo macaamiisha. Maalin kasta waxay ka dhigaan waxyaabaha hodanka ku ah raadinta, ku qasbaya booqdayaasha, iyo u soo jiid rajada iibka. Maalinta 1aad way fududahay. Maalinta 180… ma fududa.
Waxaan la shaqeyneynaa macmiil hadda ku kharash gareeyay boqolaal kun oo doolar warbaahinta dhaqameed, oo leh natiijooyin aad u liita, laakiin aan waligood si buuxda u maalgelin istiraatiijiyad khadka tooska ah arrimo dhowr ah. Marka hore, ma aysan lahayn khibrad gudaha ah oo ay si buuxda u qeexaan una fuliyaan istiraatiijiyad guuleysatay. Marka labaad, iskama mashquulin inay shaqaaleeyaan la taliyayaal maxaa yeelay qof walba wuxuu ka dhigay mid sahlan. Waxay sameeyeen dadaal badhkood ah mana helin natiijooyin… sidaa darteed waxay ku noqdeen warbaahinta dhaqameed.
Fursadda iyaga u gaar ah waa mid la yaab leh, laakiin waxay ku hungoobeen iyagoo akhrinaya maqaal ka dib maqaal ku saabsan sida ay wax u fudud yihiin. Ma sahlana dadweynow! Macaamiilkan gaarka ah, waxaan u maleynayaa inaan la shaqeyn doono wax aan ka yarayn 5 shirkadood oo kala duwan… mushahar halkii shirkad maareyn kasta ah, shirkad raadinta mashiinka raadinta, istiraatiijiyad nuxur leh, shirkad magac leh iyo shirkad sawireed, iyo inaan shaqaaleeyo istiraatiijiyadeyda gaarka ah ee raadinta iyo warbaahinta bulshada iyaga la. Waa istiraatiijiyad adag oo aan haysanno waqti ugu yar si aan u horumarinno, u fulino, una bilowno cabbiraadda natiijooyinka. Haddii aan ku heli karin kharashka halkii ugu dhow 6 illaa 9 bilood gudahood, waxaan waayi doonnaa macmiilka.
Taasi ma sahlana.
Tags: amazon s3natiijooyinka ganacsigachatjoogteyntaCabir CPmyreponomuddada booqashada
Hawl gal! Xeerarka Ganacsiga iyo Baraha Bulshada
Fiidiyow ku saabsan Naqshadeynta iyo Adeegsiga